Kuendeswa kwemaruva emaruva muMoscow
1. Ndeipi nzira yekuraira?
2. Ndingaite sei kuti nditeedzere mamiriro eodhi yangu?
3. Ndedzipi nzira dzandinogona kubhadhara odha?
4. Chii chinonzi Floristum.ru?
5. Sei ndisingakwanise kubhadhara nekadhi?
6. Unogona here kuvimbisa kuti kubhadhara nekadhi kwakachengeteka?
7. Ndingabhadhara nemari here?
8.Kudzosera mari kunoshanda sei?
9. Pane here zvivimbiso zvekuti mari yakabhadharwa ichauya kwauri?
10. Ndedzipi nzira dzinogona kushandiswa kubhadhara odha?
11. Kuendesa nekukurumidza kunogoneka here?
12. Ndeipi mari yekuendesa?
13. Kugovera kunogona kuitwa panguva chaiyo here?
14. Ini ndinogona kuisa odha kana ini ndisingazive kero yemugashiri?
15. Ndichaziviswa sei nezvekuendeswa?
16. Ndinogona here kuisa odha yekuendesa kune imwe nyika?
17. Iyo odhi ichaendeswa riini?
Mibvunzo nezve odha
18. Sei kuisa odha?
19. Chii chaunofanira kuita kana iwe usingade iwo maruva?
20. Ini handigone kufonera florists nefoni. Zvekuita?
21. Kana iyo nguva yekuendesa ichida kubvumiranwa neiye anotambira, vachazosheedza riini?
22. Ini ndinofanira here kuisa odha pamberi?
23. Kurongeka kwemubatanidzwa kunoitwa sei?
24. Chibvumirano chemasangano epamutemo
25. Kunyoreswa kunoitwa sei?
26. Ndeipi nhamba diki yemavara inowanikwa kuodha?
Mibvunzo nezve iwo maruva
27. Zvinokwanisika here kushandura izvo zvemukati meye bouquet kana yayo color scheme?
28. Ndekupi kwaungawana iko kuumbwa kwemaruva?
29. Ndingaziva sei saizi yemaruva?
30. Chii chandingawane muchikamu cheSuper Offer?
31. Ko kana iwe uchida bouquet ine mamwe maruva?
32. Maruva acho achangofanana here nemufananidzo uri panzvimbo iyi?
33. Ko maruva anogona kuitwa makuru here?
34. Zvinoita here kutenga maruva muhari kana kumichero?
35. Ndingaisa kupi zvido zvangu zveodha?
36. Maruva acho achange ari manyowani here?
Sevhisi yemhando sevhisi Floristum.ru
37. Kubhadhara kuburikidza newebhusaiti kwakachengeteka here?
38. Ini handigone kunetseka nezvekuchengetedzwa kwemari yangu?
39. Ndingawane sei mari yakabhadharwa?
40. Ndinga nyora kupi chichemo changu?
41. Ndingaite sei kunyora ongororo?
42. Mhinduro dzese ndedzechokwadi here?
43. Ini ndinogona kutumira bouquet ine kadhi-kadhi?
44. Ini ndinogona kuodha chimwe chinhu kunze kwemaruva?
45. Ndeipi kadhi ichatumirwa pamwe nemaruva?
46. ​​Ndiri kuona here mufananidzo wemugashiri pamwe nemaruva akaendeswa?
47. Une smartphone app here?
48. Sei kusarudzwa kwemaruva kwakasiyana mumaguta?
49. Sei mitengo mumatunhu ari pamusoro kudarika kuMoscow?
Kutanga, iwe unotsanangudza guta rekutakura, sarudza iwo marouki aunoda nekudzvanya pane bhatani pairi uye enda kune rekutarisa peji. Pano iwe unotsanangudza iyo data yeiye anotambira, nguva yekuendesa uye data remutumiri wemaruva. Mushure mekubhadhara kwakabudirira, odha yacho inoenda kune vanoongorora maruva. Iwe uchazoziviswa nezve kuendesa neshoko rinotumirwa kune yako yakatarwa nhamba yefoni uye email, uye ruzivo irworwo runowanikwa mune yako wega account ku.floristum.ru/en.
Isu tinotumira ruzivo rwechizvino-zvino nezve chimiro cheodha yako nemaSMS mameseji, e-mail, unogona zvakare kutarisa mamiriro eodha muakaundi yako yega pane webhusaiti yedu. Iwe uchagamuchira meseji neyemeseji nezve iyo yekugamuchira mubhadharo weodha uye vanobatana neiye florist ari kuunganidza yako bouquet, iwe unogona kubata iye florist chero nguva, kujekesa chimiro kana kuita zvigadziriso kune iyo parameter yekuodha maruva.
Iwe unogona kubhadhara zvakananga pawebhusaiti uchishandisa kadhi rebhangi kune mumwe munhu. Kune masangano epamutemo, kubhadhara nekuchinjisa kwebhangi kunowanikwa.
Floristum.ru ishumiro irinyore apo zvitoro zvemaruva uye vamwe florist vanobva kumativi ese epasi vanoisa zvigadzirwa zvavo zvinotengeswa. Pano iwe unogona kusarudza uye odha bouquet kubva kune florist kubva kuguta rako, iyo inogutsa zvizere zvishuwo zvako. Uye zvakare, vatengi chaivo vanotumira wongororo pane ino saiti, iri nyore kwazvo pakusarudza nzvimbo yekuisa odha yekutakura maruva. Floristum.ru inovimbisa iwe kuzadzikiswa kwechirongwa, mune zvisingafanoonekwi sevhisi ichadzosera mari yako kwauri, izvi zvinogoneka nekuda kwekuti vaflorist nezvitoro vanogashira mari yekuendesa maruva mazuva matatu chete mushure mekunge odhiyo yapera, panguva ino mutengi anogona kufaira chichemo uye kugamuchira mari kumashure.
Ita shuwa kuti yako kadhi rebhangi kadhi rakanyorwa nenzira kwayo, zita nesurname zvakanyorwa muChirungu chaizvo sepakadhi. CVV kodhi ine manhamba matatu ari kuseri kwekadhi. Muzviitiko zvakawanda, iyo sisitimu inotsanangudza kwauri kuti nei mubhadharo wakakundikana kupedzwa zvinobudirira. Kana mubhadharo ukarambwa nebhangi rako, ive shuwa kubata runhare rutsigiro uchishandisa nhamba yemahara kubva kukadhi rako. Edza kusarudza nzira yekubhadhara yakasiyana yeodha yako.
Ehe, isu tinovimbisa kuchengetedzeka kune vatengi vedu. Kubhadhara kunoitwa pane yakasarudzika yakachengeteka peji, uye iyo kadhi data mushure mekubhadhara haina kuchengetwa mune ino sisitimu. Isu tinoshandira pamwe netariro uye inozivikanwa-yekubhadhara system CloudPayments.
Nhasi hazviite. Munguva pfupi iri kutevera, mubhadharo wekutakurwa kwemaruva mumari uchave unowanikwa kune vatengi vedu, uye mushure mekuzadza ruzivo rwakakosha pane odha, iwe unozopihwa nzira dzinoverengeka dzekubhadhara dzaunosarudza.
Kana iko kukanzura kurongeka, iyo yakabhadharwa mari ichadzoserwa izere kuakaundi yako yebhangi mukati memazuva manomwe ebhizinesi.
Kubhadhara kweodha nekadhi rekubhangi kuri ipapo. Isu tinoshanda pamwe neCloudPayments system, inova nzira yekubhadhara yakaratidza. Mushure mekuita muripo, iwe uchagamuchira meseji yekuti kuvhiya kwabudirira. Iwe unogona zvakare kuongorora izvi muakaundi yako yega.
Iwe unogona kubhadhara odha yako zvakananga pawebhusaiti kuburikidza nekadhi rebhangi kana pawakagamuchira mari. Masangano epamutemo anogona kushandisa iyo isina mari yekubhadhara sevhisi.
Parutivi pemaruva ega ega ndiyo nguva ichashandiswa pakugadzira uye kuendesa kwemaruva. Iyo saiti ine iri nyore firita "Kurumidza kuendesa", kuishandisa, iwe uchaona zvingasarudzwa zvemabouquets ayo anogona kuendeswa munguva pfupi yenguva.
Dhirivhari muguta iri yemahara, muguta guru uye St.Petersburg - mukati mhete nzira. Kana kero yekuendesa iri kunze kweguta, saka mutengo wayo unoverengwa otomatiki. Iyo sisitimu, inoenderana nehurefu mumakiromita, inokupa iwe mutengo wekutakura. Kazhinji inofungidzirwa pa45 rubles pa1 km.
Kana iwe usingakwanise kuratidza chaiyo yekuendesa kero, asi iye anogamuchira anenge ari kunze kweguta nekukasira kana achitumira bouquet, ipapo mushandi zvechokwadi achakushevedza kuti ugadzirise nyaya iyi.
Pawebhu webhusaiti, unogona kudoma iyo nguva yekuendesa nguva. Nehurombo, sevhisi yedu haina kuendesa nenguva chaiyo. Asi isu tinoedza kutsvaga nzira yega yega kune mumwe nemumwe mutengi, kuti ugone kuratidza zvido zvako zveodha, uye vashandi vedu vanoedza kuita zvese zvinobvira kuzviita.
Ehezve, ingotisiira isu foni yemugashi. Mutori unomufonera uye ataure nguva nenzvimbo yekuendesa odha yako.
Mushure mekuisa odha, iwe uchagamuchira meseji ine yakasarudzika chinongedzo kuti utarise mamiriro eodhi yako. Nekudzvanya pairi, unogona kutaurirana neve florists, ona mafoto eiyo yakapera bouquet uye uteedzere nzvimbo yeako odha pamepu. Pakupera kwekutumirwa, unogona kunyorera wongororo kumaruva uyo wawakabatana naye. Isu tinofara kana vatengi vakapa mhinduro, kuti iwe ugone kutitumira mhinduro meseji nemaonero ako akajairika ekuraira kutakurwa kwemaruva.
Ehe, nerubatsiro rwebasa redu iwe unogona kuendesa maruva kwete kwete chete pasirese, asi pasirese pasirese. Ingo nyora iro guta rauri kufarira mukutsvaga uye iwe unozoratidzwa zvese zviripo sarudzo yemabouquets.
Pedyo nemaruva ega ega pane nguva, izvo zvinodikanwa kunyoreswa uye kuendesa bouquet kune yekuwedzera. Paunenge uchiisa odha, ita shuwa yekutarisa pairi. Kana iwe uchida kuendesa maruva nekukurumidza, saka shandisa iyo Yekukurumidza Dhirivhari firita. Kana iwe uchida kuendesa pane yakatarwa zuva, wobva wasarudza iyo kana uchiisa odha. Kana iwe ukaisa chikwekwe padivi pezwi rekuti "Yeuchidza" mune yako wega account, ipapo Floristum.ru sevhisi inokuyeuchidza nezveako odha. Tsamba ichauya kwauri mazuva matatu zuva rakatarwa rekutakura risati rasvika.
Ingotaridza nzvimbo yekuendesa, sarudza iwo marouki aunoda uye isa odha yako. Mune iwo marongero, ratidza ruzivo rwekuonana rweiye anotumira uye anogamuchira, pamwe nenguva yekuendesa. Mushure mekubudirira kubhadhara iyo odha, edu florists vanozoenda nayo kunoshanda. Iwe uchazoziviswa nezvekuendeswa neshoko.
Kana iwe usingade maruva akagamuchirwa nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, saka enda kuaccount yako pachako kana uteedzere iyi link yakatumirwa kwauri mune meseji kana tsamba. Ikoko iwe unogona kusiya mhinduro nezve yako odha. Kana iyo ongororo isina kunaka, saka iwe unogona kuvhura gakava, ipapo huwandu hwemari paaccorist's account ichave yakaoma nechando kwenguva yekutongwa. Zvinoenderana nemutemo webasa redu, mutengi anogona kubvumirana nemuruva kuti atsiure maruva kana kudzorera huwandu hwakazara. Vaflorist vanewo kodzero yekukupa mutepfenyuro pane anotevera maodha. Mhirizhonga inogona kuvhurwa mukati memazuva matatu mushure mekuunzwa kwemabiko. Kana iwe wakambonyora wongororo yakanaka yeodha kuchitoro kana kune akasiyana maruva, saka kupokana hakuzovhurike.
Unogona kudzvanya pane bhatani "Ini handikwanise kusvika kuchitoro". Mune ino kesi, muruva anotambira chiziviso chawaedza kufonera, uye chiyero chechitoro chinodzikiswa otomatiki. Nekudaro, isu tinosangana nechitoro, uye vashandi vayo vachakufonera zvakare.
Kazhinji vanogamuchira vanofambiswa pamberi pekutakura chaiko. Mutumwa anozobvumirana nenguva iri nyore yekuendesa maruva matsva kukero. Kana iwe ukaisa odha yezuva chairo, ipapo iye anogamuchira anozofonerwa pazuva rekusvitsa, kazhinji mangwanani. Muaccount yako wega, unogona kuwana nguva yekuendesa yeodha yako, inozoshandurwa kuita nguva iri nyore yemugashiri.
Kune yega yega bhaweti pane yakashomeka nguva yekunyoreswa kwayo uye kuendesa, inoratidzwa padyo neumwe neumwe maruva. Iwe une mukana wekuisa odha zvese pamberi uye pazuva rekusununguka.
Basa redu rinoshanda pamwe nemasangano epamutemo uye rinowanzoita zvirevo zvemakambani, mune izvi isu tinobatsirwa ne otomatiki system. Iyo hombe assortment yemaruva inokutendera iwe kusarudza maruva kune chero chiitiko. Paunenge uchiisa odha, iwe unofanirwa kuratidza ruzivo rwechisangano chepamutemo. Invoice ichaendeswa pakarepo kune tsamba yako.
Paunenge uchiisa odha yekutanga pane yedu sevhisi zviri pamutemo, iwe unozotumirwa wega tsamba ine chibvumirano uye invoice. Iwe unofanirwa kuzadza, kusaina uye kutumira chibvumirano chakagamuchirwa mumakopi maviri kune yedu tsamba. Ipapo tichazotumira imwe yacho kwauri.
Kana iwe uchifarira kuona kondirakiti usati waisa odha, ipapo taura nesu: @
Mutengi anonyoresa pane saiti otomatiki mushure mekuisa odha yake yekutanga. Iyo mbozhanhare nhamba yawatsanangura muhurongwa ruzivo ichave yako yekupinda mune ramangwana. Iyo kodhi yekupinda yako wega account ichatumirwa kwauri neshoko.
Kana iwe ukaraira maruva pachidimbu, iwe unofanirwa kusarudza angangoita manomwe zvidimbu. Isu tinokukurudzira kuti uende kune iyo "Super Offer" chikamu, inogona kuwanikwa pane iyo huru peji resaiti. Heano zvipo kubva kumatoro ezvitoro uye zvitoro zvine mutengo wakanaka ma tag.
Hongu unokwanisa. Kana iwe uchida kuchinja chimwe chinhu mune yakasarudzika bouquet, saka ingo siya zvido zvako mune iyo yekuwedzera ruzivo panguva yekuraira maitiro. Vaflorist vedu vanokufonerai kuti mutaure zvingabvira zvekutsiva zvingasarudzwa.
Pedyo nemufananidzo nemaruva pane kuongororwa kwakazara kweayo marongerwo. Iwe unogona zvakare kudzvanya pane chero zita reruva, rinosimbiswa muvara mumufananidzo.
Kukura kwemaruva kunoratidzwa padyo nemufananidzo wega wega. Ivo vanoratidzwa nemuruva florist anova iye murongi wemaruva akarongeka.
Heano zvipo kubva kumatoro ezvitoro uye ezvitoro nemitengo yakanaka yemabouquets. Uye zvakare, iwe pachezvako unogona kusarudza pamusoro pehuwandu hwemaruva, mhando, kureba kwemuti uye ruvara.
Kuti uwane maruva nemaruva aunoda, tarisa kune rubatsiro rwezvisefa.
Ehe saizvozvo. Vaflorist vanotumira mifananidzo yemabouquets ayo avakatounganidza kare, saka zvichave nyore kwavari kuti vabereke zvakafanana chimiro.
Ehe, nekuenda kune iro peji rezvigadzirwa, iwe unogona kuwedzera iwo maruva ne30% kana 60%. Ndiko kuti, mutengo weiyo bouquet uchave wakakwira nechikamu ichi chemari yekutanga, uye maruva akaisirwa mumaruva anozowedzerwa mukuumbwa. Kana iwe ukasarudza bouquet yemhando imwe yemaruva, saka unogona kuwedzera huwandu hwavo chero nhamba.
Ese bouquet sarudzo dzinowanikwa pane saiti. Tinokurudzira kushandisa mafirita ari nyore pakutsvaga kwako. Asi isu tinonyanya kushanda nevashambadzi vanoshanda nemaruva akachekwa.
Ratidza zvaunoshuvira uye mamiriro ekuti zadzikiswe mune rumwe ruzivo. Kana zviripo, mutengesi uyu anokufonera kuti ukurukure.
Vanoshanda Florists vanobatana nebasa reFloristum.ru vanoziva mutemo wedu: "Maruva matsva chete! Kusabvumirana? Floristum.ru haisi yako. " Naizvozvo, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti chete maruva matsva anosanganisirwa muchimiro. Pakununurwa kwemaruva, anogamuchira anoongorora kutsva kwemaruva. Mushure mezvose, kune wega wega florist iwe waunofarira, iwe unogona kuwana kuongororwa pawebhusaiti yedu.
Ehe, kubhadhara kunoitwa pane rakaparadzana peji, uye mutengi data haina kuchengetwa. Isu tinongoshanda chete neanozivikanwa uye akavimbika masystem.
Ehe saizvozvo. Paunenge uchiisa odha, unoisa mari kutanga muaccount yebasa redu, kwavanochengeterwa kusvikira odha yapera uye kune mamwe mazuva matatu mushure. Chiyero chakadai chinotorwa kuitira kuti mutengi ave nemibvunzo nezve odha. Panguva ino, iwe une mukana wekuvhura gakava, ipapo mari haizoendi kuaccorist account kusvikira matambudziko ese agadziriswa.
Kana iyo odha yatotorwa kuti iite basa, saka uchafanirwa kumirira kubva 1 kusvika kumazuva gumi nemana ekushanda.
Kana iwe uchiri kuodzwa moyo neodha yako, ita shuwa yekunyora ongororo. Kana zvisina kunaka, saka unogona kuvhura gakava neiye florist. Panguva yekujekeswa kwemamiriro ese ezvinhu, mari iri pane account yemuruva ichavharwa. Iwe unogona kubvumirana neye florist kutsiva bouquet kana kudzorera izere huwandu hwemari. Vaflorist vedu vanokoshesa vatengi vavo, saka ivo vanowanzo vapa iwo madhora pane anotevera maodha. Gakava rinogona kutangwa mukati memazuva matatu kubva musi wekusvitswa kwemahombekombe. Kana iwe wakambosiya wongororo yakanaka pane iyo odha, saka kuvhura gakava hazvigoneke.
Mushure mekunge maruva aunzwa, meseji ichatumirwa kunhamba yako yefoni, mukupindura kwaunogona kunyora zvaunoona zvekushanda nemuruva maruva uye neodha yacho pachayo. Panzvimbo iyi, nekupinda account yako wega, unogona kunyora ongororo.
Chitoro chega chega chine wongororo zhinji, pakati pavo pane mhinduro dzakanaka nedzakaipa. Parutivi peumwe neumwe wavo, zvinoratidzwa kuti ndiani akanyora ongororo: mutengi kana iye anogamuchira. Ongororo inogona kungogadziriswa nemunhu akazvinyora kare.
Isu tinopa yemahara kadhi repositi kune wega wega bouquet. Mutengi chete ndiye anofanirwa kunyora chinyorwa chekukwazisa. Murimi achasarudza kadhi rinowirirana nemaruva ako uye zvinyorwa.
Paunenge uchiisa odha, iwe uchaunzwa nemimwe mimwe michina yekuwedzera. Kana iwe ukasawana zvaunoda pano, saka bata vashandi, ivo zvechokwadi vanouya kuzokubatsira.
Mucheri anotora kadhi rekukwazisa zvichibva pane zvawanyora. Asi kana iwe uine zvido chaizvo, saka tizivise nezvavo mune rumwe ruzivo kana uchiisa odha.
Paunenge uchiisa odha, isa chishambwe pamberi pemashoko ekuti "Tora pikicha uine bouquet". Kana wekuwedzera achibvuma, iwe uchawana mufananidzo muakaundi yako yega kana neemail.
Iyo nharembozha application "Floristum.ru maruva" inogona kukurumidza kutorwa kubva kuAppStore kana PlayMarket.
Yedu sevhisi inoshandisa vaflorist vanobva kumaguta akasiyana. Paunenge uchiisa odha, florist anoshanda naye, uyo akaburitsa chipo muguta raunosarudza. Guta rega rega rine akasiyana maruva, saka iwo assortment anosiyanawo.
Kune akawanda maflorist mumaguta makuru, saka anokwezva vatengi kwete kwete chete neakawanda zvigadzirwa, asiwo nemitengo yakaderera.